I-Town Square Condo, Ikhishi Eligcwele #5 - I-Airbnb
I-Town Square Condo, Ikhishi Eligcwele #5
OKUQINILE: AKUKHO OKUGWAYO/ AKUKHO IZILWANE.
I-STUDIO APARTMENT. Ibhulokhi EYODWA nje ukusuka esigcawini sedolobha.
Ayifanele izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12.
Umbhede omusha wendlovukazi, ukugeza okugcwele, ikhishi eligcwele ngokugcwele.
Iwashi/isomisi esisebenza ngohlamvu lwemali
Indawo yokupaka mahhala
Itholakala endaweni engaphansi kwesakhiwo esisetshenziswa okuxubile- ihhovisi lamazinyo esitezi sokuqala, ifemu yezakhiwo esitezi sesibili. I-Air compressor ingumakhelwane, kusukela ngo-7:30 am- 5pm Mon-Fri uzozwa ukuduma okuphansi komshini ngezikhathi ezithile.
Siyakwamukela ku-Jackson Wyoming! Leli fulethi leSitudiyo lingenye yezindawo eziqashisayo eziseduze kakhulu neTown Square edumile enamakhothamo e-Elkhorn asohlwini lwe-Airbnb! Ngokuhamba kwebhulokhi elingu-1 kuphela ukuya esigcawini sedolobha uzozithola uzungezwe yonke intokozo ehlanganisa ukudla okuhle, ukuqhuma kwamagalari obuciko, izinto zakudala zakudala zasentshonalanga nezinsalela, ukuthenga, nomlando othakazelisayo wase-Wild West.
Okusanda kuvuselelwa, OKUNCANE KAKHULU, ifulethi elingaphansi kwe-studio
Umbhede omusha we-Queen
Ikhishi elincane, kodwa eligcwele ngokugcwele. Hlanganisa ukudla okuphekwe ekhaya! Ilungele ukuhlala isikhathi eside.
Isiqandisi\_uhhavini ogcwele\_microwave\_umenzi wekhofi. Awukho umshini wokugeza izitsha.
Izimpahla zokupheka ezijwayelekile: amabhodwe, amapani, izitsha zokupheka, izitsha zokudla okuyisisekelo sokupheka.
Asikho isidlali seDVD
I-inthanethi enesivinini esikhulu
I-fan enyakazayo yokuhamba komoya
Indawo yokupaka eyodwa yamahhala, izimoto ezinosayizi ojwayelekile kuphela
Iwashi\_umshini wokomisa womshini womphakathi/Okwabelwana ngawo uqhelelene neyunithi.
IQINISO: Nakanjani Akukho ukubhema\_Azikho izilwane ezifuywayo ezivunyelwe.
Lesi situdiyo esithandekayo esingaphansi kwesitediyo esisenkabeni yedolobha LINCANE KAKHULU futhi engamamitha skwele angama-350 kuphela. Ingaphansi kwesakhiwo "esisetshenziswa okuxubile" esinehhovisi lamazinyo esitezi esikhulu kanye nefemu yezakhiwo esitezi esiphezulu. Ihhovisi lamazinyo livuliwe ngoMsombuluko-uLwesihlanu (7:00 am - 5:00pm). Uzozwa imisindo evela ehhovisi lamazinyo ngalesi sikhathi. Akukho okunomsindo kakhulu. Ngihlinzeka ngemishini yomsindo emhlophe nama-earplugs kuwo wonke amafulethi ami uma lokhu kuyinkinga kuwe. Nokho, uzoyithola ithokomele, iphelele, futhi ihlanzeke kakhulu. Ekuqaleni kuka-2017 yalungiswa kabusha okuhlanganisa iphansi elisha, upende, ubuciko, kanye nombhede wendlovukazi omusha onethezeke kakhulu. Igumbi lokugezela elincane linawo ubhavu\_ukugeza ogcwele onamanzi ashisayo angenamkhawulo. Le yunithi ihlanzwa ngokomsebenzi yinkonzo yokuhlanza yasendaweni futhi inakekelwa kahle.
Njengoba izithombe zibonisa kunamawindi amakhulu angu-2 (angenakho ukubukwa nokho) anikeza ukukhanya okuningi. Ayifani negumbi elingaphansi elibandayo, elimnyama nelingcolile. Jabulela izinyawo ezifudumeza phansi. I-AC ayifakiwe, kodwa ayidingeki. Iza nesiphepheli esihle sokuzungeza umoya futhi idale "umsindo omhlophe" uma uthanda.
Indawo yasekhishini iphelele ngesitofu esiwusayizi ogcwele nesiqandisi. Ine-microwave, i-coffee maker, i-toaster, i-blender, nakho konke okudingayo ukuze udale isidlo osithandayo (amabhodwe, amapani, nezitsha zokupheka). Ayinawo umshini wokuwasha izitsha.
Ukupaka: Kulabo abake bashayela eJackson phambilini, yazini ukuthi ukupaka eduze kwedolobha kungaba inselele kanye nekhanda elibuhlungu langempela. Inkinga ixazululiwe! Kukhona indawo yokupaka yamahhala endaweni yokupaka ngemuva kwesakhiwo ukuze ukwazi ukushiya imoto yakho endaweni ephephile njengoba uhamba ngezinyawo uzungeza i-Jackson. Izimoto ezinosayizi ojwayelekile kuphela- awekho ama-trailer. Lapho uhlala, uzobona ngokushesha inani lale ndawo yokupaka ephakathi kwedolobha. Uma ungenayo imoto leli fulethi liseduze nesitobhi sebhasi kanye nesiteshi samatekisi. Futhi, le yunithi ilungele labo abafuna ukuhamba futhi bajabulele idolobha laseJackson.
Izitezi zangaphandle zangaphandle zinikeza ukufinyelela kule yunithi. Bona izithombe.
I-Yummy: Ngethemba ukuthi uzosebenzisa ithuba lesitolo sethu sebhikawozi esiyintandokazi se-"Persephone" esisendaweni eyibhulokhi elilodwa. Iphunga elimnandi lamakhekhe awo amahle nezibiliboco kuzokushiya ulindele ukubuya kwakho. Ukudla kwabo kwasekuseni okujabulisayo kuyindlela enhle yokuqala usuku.
Kukhona inqwaba yezindawo zokudlela ezinhle kanye nezindawo zokudlela ezinhle ngaphakathi kwebanga elifushane lokuhamba.
Ngijabule kakhulu ukwabelana ngaleli fulethi nabanye abafuna ukujabulela idolobha laseJackson. Ngizophendula ngokushesha nangokucophelela yonke imibuzo onayo ngaphambi nangesikhathi sokuhlala kwakho. Ngingakunikeza inani lezincomo zokudlela nezomsebenzi uma ucela. Ngizimisele ukwenza konke engingakwenza ukuze ngenze ukuhlala kwakho kube mnandi futhi kukhumbuleke.
Idolobha laseJackson eligunyazwe ngokomthetho\_imvume yokuqasha yesikhashana # 6760
Ngokwemithetho yethu yendawo u-8% wentela yokuthengisa yengezwe ezindlekweni eziphelele.
Ikheli: 200 E. Broadway, bsmt iyunithi #5
Lena yiyunithi engu-1 kwezingu-6 eziqashisayo kuleli gumbi elingaphansi.
Isixhumanisi esiya kumthetho wokuqasha wesikhashana:
4.94 · 231 okushiwo abanye
Uma kukhona okudingayo vele ungishayele ucingo noma ungithumelele umlayezo.